Isku socodka Gadiidka Puntland iyo Soomaaliland oo la xiray. | Puntland Vision
Isku socodka Gadiidka Puntland iyo Soomaaliland oo la xiray.
Xili shalay dagaalo kasoo cusboonaadeen gobolada Sool iyo Nugaal ayaa waxaa la hakiyey isku socodka Gadiidka labadaasi maamul.
Gudoomiyaha gobolka Nugaal Mudane Cumar C/laahi Farweyne oo warbaahinta kula hadlayey magaalada Garowe ayaa sheegay in lajoojiyey dhamaan isku socodkii Gadiidka ee isaga bixi jiray gobolada Sool iyo Nugaal iyo guud ahaan Puntland iyo Soomaliland.
Gudoomiyaha gobolka Nugaal ayaa sheegay ilaa inta ay dib kasoo sheegayaan waqtiga la furayo isku socodka gadiidka in la hakiyey oo aysan jirin cid ka timaada Soomaaliland oo u soo gudubta deeganada Puntland isagoo taas ku macneeyey Colaadaha.
Cumar C/laahi Faraweyne Gudoomiyaha gobolka Nugaal ayaa sheegay kaliya isku socodka loo ogolyahay Gadiidka inay tahay kuwa dagaalka iyo masuuliyiinta Puntland iyo Soomaaliland.